Bit By Bit - The ramangwana - 7.2.1 Kubatanidzwa kwevakagadzirira uye vakachengetedza
Hakuna nzira yakagadzirirwa yakagadzirirwa kana chirongwa chakachengeteka chekuchengetedzwa kwekambani inoshandisa zvizere zvikwaniso zvezera re digita. Mune ramangwana tichaenda kuumba ma hybrids.
Muchirevo, ndakapesana nemhando yakagadzirirwa yaMarcel Duchamp nechimiro chekuchengetedzwa kweMichelangelo. Ichi chinopesanawo chinokonzera kusiyana pakati pemasayendisiti, avo vanowanzoshanda ne readymades, uye masayendisiti masayendisiti, avo vanowanzoshanda nechekuchengetedza. Mune ramangwana, zvisinei, ndinotarisira kuti tichaona huwandu huzhinji nokuti imwe neimwe yemaitiro akajeka akaderera. Vatsvakurudzi avo vanoda kushandisa madzimambo chete vari kurwisana nekuti hakuna vakawanda vakagadzirira vakanaka munyika. Vatsvakurudzi vanoda kushandisa masimba ekuchengetedza chete, kune rumwe rutivi, vari kupira zviyero. Nzira dzakasvibiswa, zvisinei, dzinogona kuenzanisa chiyero chinouya ne readymades nekanyatsokodzera pakati pemubvunzo uye deta inobva kuvasungwa.
Takaona mienzaniso yezviyo zvinyorwa mune imwe neimwe yezvitsauko zvina. Muchitsauko 2, taona kuti Google Flu Trends yakabatanidza sei nguva yakawanda-yakakura dhidhiyo (mibvunzo yekutsvakurudza) neine inogona-based traditional measurement system (iyo CDC fenza chirongwa chekuongorora) kuti ibudise mahesera anokurumidza (Ginsberg et al. 2009) . Muchitsauko 3, taona kuti Stefano Ansolabehere naEitan Hersh (2012) vakaunganidza sei tsvakurudzo yekuongorora yakaitwa nemaitiro ehurumende yakagadzirirwa yakagadzirirwa kuitira kuti vadzidze zvakawanda pamusoro pehupenyu hwevanhu vanovhota. Muchitsauko 4, takaona kuti Majekesheni ekugadzira akabatana sei akagadzirira magetsi ekugadzirisa zviyamuro nehutano hwekuchengetedzwa kwevanhu kuti vaongorore migumisiro yemitemo yevanhu mumitemo yemamiriyoni evanhu (Allcott 2015) . Pakupedzisira, muchitsauko 5, takaona kuti Kenneth Benoit nevamwe vaaishanda navo (2016) vakashandisa nzira yekunyora-coding yekuchengetedzwa kwevanhu vakachengetedzwa vachienda kune imwe nzira yakagadzirirwa ye manifesto yakagadzirwa nemapato ezvematongerwo enyika kuitira kuti vatsvakurudzi vashandise kuongorora kushandiswa kwemakakatanwa emitemo.
Iyi mienzaniso mina yose inoratidza kuti sarudzo ine simba mune ramangwana ichave yekugadzirisa zvinhu zvikuru zvemashoko, izvo zvisati zvasikwa kutsvakurudza, nehumwe humwe ruzivo runoita kuti vakwanise kutsvakurudza (Groves 2011) . Pasinei nokuti inotanga nechekuchengetedza kana kuti yakagadzirira, tsika iyi yehubhoni inobata vimbiso yakawanda kumatambudziko akawanda ekutsvakurudza.